Ntuziaka zuru oke maka nlekota nchekwa data dị irè
Gịnị bụ Database Monitoring?
Ngwa na-enye visibiliti ozugbo n'ime ahụike sistemụ nchekwa data gị site na ịnakọta metrik site n'ọtụtụ ebe dị ka ndekọ sistemụ arụmọrụ, ndekọ ihe nkesa ngwa, ma ọ bụ ọbụna ngwa ọdịnala na-agba ọsọ n'elu sava nchekwa data gị. Enwere ike ịnakọta metrik ndị a n'oge dị nso iji chọpụta nsogbu ndị nwere ike tupu ha emetụta oke ọrụ mmepụta. Na mgbakwunye, ikike iji nyochaa metrik ndị a na-enye gị ohere ịchọpụta nsogbu ndị nwere ike ọ gaghị achọpụta ruo mgbe oge gafere.
Otu esi enyocha nchekwa data?
Enwere ọtụtụ ụzọ ị nwere ike isi nyochaa ọdụ data gị. Ụfọdụ ọmụmaatụ gụnyere:
- Ịbanye n'ime MySQL site na SSH/MySQL Workbench/etc., wee lelee ndekọ maka tebụl ọ bụla n'otu n'otu. Usoro a chọrọ ka ị nweta ihe atụ nke MySQL na-agba ọsọ na sava ọzọ. Ị nwere ike iji usoro a ma ọ bụrụ na ị na-eji Amazon RDS. Ọ bụrụ na ịchọghị ịkwụ ụgwọ maka ọrụ AWS, ọ dịghị mkpa ka ị na-agba ọsọ MySQL n'onwe gị; Naanị jikọọ na ha site na SSH.
- Iji ngwaọrụ dị ka Percona XtraBackup, nke ga-akwado tebụl niile n'otu oge. Ọ bụ ezie na ọ naghị enye ozi ozugbo, ọ na-enye gị ohere ịhụ ihe mere mgbe nsogbu mere.
- Na-eme nkwado ndabere na mpaghara zuru oke na MySQL juputara, wee weghachi site na nkwado ndabere na mpaghara ndị a. Nke a na-enye gị ohere iweghachite tebụl n'otu n'otu na-enweghị iji aka mepụta ndị ọhụrụ. Agbanyeghị, nke a agaghị agwa gị ihe ọ bụla gbasara ogologo oge ihe were mecha.
- Na-agba ọsọ ajụjụ megide data n'onwe ya. Ụzọ kachasị esi eme nke a bụ site n'ịjụ ajụjụ INFORMATION_SCHEMA ozugbo. Echiche ndị a nwere metadata dị ka aha kọlụm na ụdị, ndeksi, wdg.
Usoro nlekota nchekwa data
Ọ dị mkpa ịhazi omume nke nlekota nchekwa data. N'ịtụle ịdị mkpa na ịdabere na ya, ọ dị mkpa iji nyochaa metrik ziri ezi na-abụghị naanị na-enyere ụlọ ọrụ aka itolite kamakwa na-enye aka dozie nsogbu ahụ. N'okpuru ụdị nke ọ bụla, enwere ụdị metrics nchekwa data ole na ole kwesịrị ịtụle nlekota. Nke a bụ metrik nlekota nchekwa data ole na ole ndị otu kwesịrị inwe na mmemme ha na-eme mgbe niile.
Infrastructure: Mgbe a bịara na akụrụngwa nke nzukọ, ọtụtụ metrik na-abata na radar ka a na-enyocha ya.
- Nchekwa itinye n'ọrụ
- Nrụ ọrụ bandwidth netwọkụ na ojiji
-ahụike okporo ụzọ
nnweta: Ọ dị mkpa ịnweta nchekwa data oge niile iji hụ na arụmọrụ dị mma. Ọ na-echekwa mkpesa ndị ahịa ka enwere ike ịchọpụta iwe tupu ọdịda.
-Iji protocol dị ka Ping ma ọ bụ Telnet iji nweta ọnụ ọgụgụ nchekwa data.
-Ịnweta ọdụ ụgbọ mmiri na ebe njedebe
-Ịchọpụta ihe omume dara maka ọnụ ọnụ
Site na ntinye: Iji mepụta usoro ihe omume nkịtị, ọ dị oke mkpa iji tụọ ntinye. Enwere ụdị metrik dị iche iche dabere n'ụdị ebe nchekwa data. Ihe metrik ọkọlọtọ bụ isi ka enyere n'okpuru.
-Ọnụ ọgụgụ nke njikọ nchekwa data na-arụ ọrụ na ajụjụ
- Nkezi oge iji chịkọta iwu
- Ọnụọgụ azụmahịa na-aga nke ọma
-Ọnụ ọgụgụ nke natara na ezitere iwu
-Chere oge maka njedebe nchekwa data na ọdụ ụgbọ mmiri
Performance: Ọ dị mkpa iji nyochaa n'ozuzu arụmọrụ nke ngwa na Database. Site n'ịleba anya na arụmọrụ ahụ, ọ na-adị mfe ịchọpụta nkwụsịtụ na nsogbu na-akpata ihe. Nke a bụ metrik ole na ole ị ga-atụ mgbe ị na-elele arụmọrụ nke database.
-Ọnụ ọgụgụ nke mkpọchi na nchekwa data oge agwụchala
-Ojiji diski mebere
-Ajụjụ ndị na-agba ọsọ nwayọ karịa ụkpụrụ ọnụ ụzọ
-Ajụjụ nwụrụ anwụ
Ihe A Haziri Ahazi: A na-enwekarị ọrụ ugboro ugboro nke a maara dị ka ọrụ. Ọrụ ndị na-eji oge, ego na-ahapụ ọrụ ndị dị mkpa na-ekenyeghị. Ihe nkesa Microsoft SQL ma ọ bụ Oracle nwere akụrụngwa nhazi oge ọrụ ha na-arụ ọrụ ndị ahụ dịka ihe ndị ka mkpa. Ọrụ ndị ọzọ kwesịrị iji nhazi oge nke ndị ọzọ. Nke a bụ metrik ole na ole ị ga-enyocha mgbe ị na-enwe ndị nhazi oge.
-Ndabere nchekwa data
-Ndokwa nchekwa data
-ọrụ kpọmkwem ngwa
Security: Nchekwa nchekwa data kwesịrị iji ebumnuche nchekwa zuru oke na-arụ ọrụ. Nke a bụ obere igwe metrik ole na ole nwere ike nyochaa.
-The dara nbanye mgbalị
-Mgbanwe nhazi na database
-Mmepụta nke ndị ọrụ ọhụrụ
-Ụdị okporo ụzọ na-adịghị ahụkebe
ndekọ: Ndekọ bụ otu n'ime ndị ọsụ ụzọ ma a bịa n'ihe gbasara nlekota oru. Ebe nchekwa data ọ bụla nwere ụdị data ndekọ dị iche iche nwere mmemme yana ndekọ na nchekwa data. Ọ bara uru ma baa uru ịnweta njikwa log n'ihi na ndekọ nwere ozi dị oke ọnụ ahịa ma dị nro n'ime.
- Mpụta nke ọrụ akwadoro
- Ndị ọrụ na ozi sistemụ
-Ihe omume usoro nchekwa data
N'ozuzu, ọ bụ nnọọ mmanye nyochaa Database ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ chọrọ iji hụ na a ezigbo onye ọrụ ahụmahụ na-etowanye ike na ike na ahịa. AIOps nke Motadata kwadoro bụ ihe AI-Driven IT Operation ngwọta nke nwere ike inyere gị aka nyochaa ihe omume ọ bụla na mmelite na-eme na nchekwa data gị n'ihi na Motadata AIOps ihe omume ọ bụla bara uru.